Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ကမ္ဘာကြီး ပျက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးစများ
Writer Sein Lyan Time 11:23 pm
အမ်မယ် ၁ တွေ ရလို့ပါလား
ပြောမယ့်သာပြောတာပါ ၂၀၁၂ တဲ့ မနက်ဖြန် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတောင် မသိကြဘူး...။
တကယ်ဖြစ်ရင်လည်း ကံထူးတယ်လို့ပဲ ရှာကြံဖြေသိမ့် လိုက်မယ်....။
အမ် ငါတယောက်ထဲ သောင်းကျန်း သလို ဖြစ်နေပြီ
သြော် လူကြီးတွေ တောင် ဒီလိုဖြစ်နေကြတာကိုး
ခလေး တွေ ဖြစ်တဲ့ ၀က်ကလေးနဲ့ ပါးလုံး ကတော့
ဘာမှ ပြေားစရာ မရှိတော့ဖူးပေါ့
၁ ကနေ ၁၀၀ ထိ ယူသွားပါလား
24 October 2009 at 23:49
မစေားလွန်းဖူးလားဟင် ရုံလေးက ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတာ
နေချင်သေးတာပေါ့ အပေါ် ကလူကြီးတို့ 
နံပါတ် (၁၀)ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ
အဲဒီလို သေမယ်လို့ ကြိုကြိုတင်တင်သိရတာလည်း ကောင်းတာပဲ။
မယုံတဝက်ပေမယ့် ဘယ်အရာမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူးလေ။
ကျနော်ကတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ လုံးဝယုံတယ်...
25 October 2009 at 03:06
အစ်မက ဖြစ်မလာဘူးမပြောနိုင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုအတွက် ဖြစ်လာခဲ့ရင် ....
အဲဒီကမ္ဘာပျက်တဲ့ကားဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၂ ပဲ။
၂၀၁၂ မပြောနဲ့ ညနေဆိုတာတောင် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တာမှမဟုတ်ဘဲ။
ဖိုးစိန်ရဲ့ အတွေးစတွေကို ကြားအောင် လာနားထောင်သွားတယ်။ လုပ်စရာတွေ လုပ်မြဲလုပ်နေမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးလေးကို ကြိုက်တယ်။
တကယ်ဖြစ်ရင်..credit card အကြွေးတွေ..မပေးရတော့ဘူး ဆိုပြီး ဝမ်းသာနေတာ....း)
25 October 2009 at 06:02
တကယ်ပျက်တော့လည်းပျော်စရာကြီးပေါ့ အဲ့ဒီကား ထွေလာထဲက စာသားလေးအတိုင်းပဲ...
တစ်နေ့မှာတော့ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး တသားတည်းဖြစ်ကြလိမ့်မည်... တဲ့...
သေတော့လဲ တဘဝငြိမ်းတာပေါ့ဗျာ... ပျက်တော့လဲ ပျက်ပေါ့ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေအတွက်က သေသော်မှတည့်အောကောင်း၏တဲ့ အုပ်ချုပ်မှု မကောင်းတဲ့ လူတွေရဲ့အောက်မှာ နေရတာထက်စာရင် သေသွားတာမှ ဟုတ်တုတ်တုတ်ရှိသေးတယ် မဟုတ်လား..။
ကိုယ်ဆိုရင်းတော့ တွေးမိမယ် မထင်ဘူး။
ဆိုရင်တော့ တွေးစရာတွေက အများသာနော်
ဘယ်အရာမှ မတည်မြဲတတ်ဘူးဆိုတဲ့ ဓမ္မတာပါပဲ...ကြုံရင်လည်း ဆုံတွေ့ ဖူးသွားတာပေါ့
ဘာလို့ လူဖြစ်ဖို့ ကြောက်ရမှာလဲ
လူဖြစ်မှ ကောင်းတာလုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိမှာလေ
ဘုရားကို ဘုရားမှန်း တရားကို တရားမှန်း သိတာက အသိဥာဏ်ရှိတဲ့လူမို့ သိခွင့်ရှိတာမဟုတ်လား
ဘယ်အချိန် သေရ သေရ အသေတတ်ဖို့တော့ ကြိုပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်
အသေမတတ်ရင် ကောင်းတာ ဘာလုပ်ခဲ့ လုပ်ခဲ့ စွဲမိစွဲရာစွဲပြီး မရောက်သင့်တဲ့ နေရာတွေ ရောက်ရမှာ ကြောက်တယ်
ဒီအတိုင်းဆိုရင် ကမ္ဘာပျက်မှာကို ကျိတ်ပြီး ၀မ်းသာနေတာ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲမဟုတ်တော့ဘူး.. တော်သေးတာပေါ့...
တစ်ယောက်ထဲထင်လို့ ငါ ပုံမှန်မှ ဟုတ်ရဲ့ လားဆိုပြီး
လူတော်တော်များများကတော့ ပျက်လည်းပျက်ပေါ့ ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးပဲ ရှိမယ်ထင်တယ်နော်..
လူဆိုတာ သေတစ်နေ့ မွေးတစ်နေ့ မို့ 
သေမယ် ဆိုတာ ကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။
သေနည်း တတ်ဖို့ က အဓိက ပါ။
သေနည်း မတတ်ခဲ့ရင်တော့ ဒီသံသရာ
၀ဲဂယက် က ပြန်လည်နေဦးမှာပါပဲလေ။
အေ၇းသားကတော့အရင်တိုင်းမပြောင်းလဲးးးးးးး မဖြစ်နိုင်သေးတာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ ရင်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ပူပင်နေမဲ့ အစား လက်ရှိ အခြေနေတခုကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရင်း လာမဲ့ အနာဂတ်ကို လှပအောင် ဖန်တီးချင်တာပါ ပြောရရင်ကျယ်ပြန့်လွန်းလို့အစဉ်သင့် လေး အလိုက်သင့် လေး နေရတဲ့အခိုက်တန့်လေးမှာအချိန်လေးနဲနဲပေးနိုင်မယ် ဆိုရင် ညစဉ်မအိပ်ဖြစ်သေးခင်မှာ ဘုရား တရား သံဃာ အနည်းဆုံး ဦးသုံးကြိမ်လောက် ၀တ်ပြုပြီး ခ န္တာကိုယ်ရဲ့ ဖြစ်ပျက် ပြောင်းလဲ တာလေးဂရုစိုက် ကြည့် လိုက်ရင် လွယ်လွယ်လေးနဲ့တခဏအေးချမ်းမှုကို ရနိုင်ပါလိမ့် မယ်လို့အလျှင်းသင့် သလို အကျဉ်းချုံးတင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ် ချစ်တဲ့ကိုကြီး သုဒြေ္န
on that day, take nice bath shower , wear nice beautiful cloth,prepare beautiful flower ,eatalot >what ever u like ,sit down nice sofa or lie down clean bed ........wait for ready to go ........think what u like. think what u done in ur life . so after that wait .....( what time they said ) i don't what time ???/??????????????
ကြည့်ရတာ ကမ္ဘာပျက်လို့သေမယ်ဆိုရင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် သေကြမယ့်သူတွေချည်းဘဲ ..... နေပါအုန်း ကမ္ဘာမပျက်ဘဲ အခုသေရမယ်ဆိုရင်ကော.... ဟားဟား..... မဂျူကတော့ ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကြောင်းမအေးတဲ့ မိဘတွေကိုဘဲစိတ်အေးချမ်းစေချင်တယ် သူတို့ဟာဘာမှကိုမသိလိုက်ဘဲ ကံကုန်သည်အထိ အေးအေးချမ်းချမ်း နေသွားစေချင်တယ်....ဖိုးစိန်လိုဘဲ ကိုယ်ဘဲ မကောင်းသောအရာအားလုံးကို သိမ်းကြုံးယူသွားလိုက်တော့မယ် .....ခက်တာက အဲလိုမှမဖြစ်နိုင်တာလေ.....တစ်ခေါက်လောက်တော့ အမရဲ့အမေကိုဒီမှာခေါ်ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေစေချင်သေးတယ်... အိမ်ပြန်ဘို့ဆိုတာကမလွယ်ဘူးလေ...
of course , i am ready for any thing ,by the way my mother is with me in new york , 20 years ago . we have every thing ,we did every thing . if that day does come, why sit around and wait for it? why not do something beneficial for you and your family.
i am enjoy my life already .
i am agree , if u not marry look hurry ......haa haa haa ....aaaaaaa
ဖတ်သွားတယ် မဖြစ်သေးတာကို တွေးပူပြီ ၀မ်းနည်းနေမဲ့လူ မဟုတ်တာကို ဂုဏ်ယူပါတယ်။ စိန့်အတွက် ပေါ်ပေါ် ဂုဏ်ယူပါတယ်
ဖိုးစိန် ရေ အရေအသားတွေကတော့ ခံယူချက်တွေက အရမ်းကောင်းတယ်
နေ့အိပ်မက်တော့ ကမ္ဘာပျက်မယ်ဆိုတာ မယုံ.... ဘုရားဟောထားတယ်လေ.... နောက်ဘုရားတစ်ဆူမပွင့်မချင်း ကမ္ဘာမပျက်.....
ဒါနဲ့ ကိုဖိုးစိန်ရေးထားတာ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်.. ဒါပေမဲ့ အကောင်းမြင်သလိုလိုနဲ့ နည်းနည်းများ အဆိုးမြင်စိတ်ပါနေသလားလို့.. တွေးမိတာ ပြောပါတယ်..
ပျော်ပျော်ကြီး သေကြတာပေါ့..း)
ကိုဖိုးစိန်ရေ မရောက်တာကြာသွားတယ်ဗျာ.... နေမကောင်းလို့ စာရေးချင်စိတ်တောင် ပျောက်သွားတယ်... ဒါပေမယ့် စာရေးချင်တဲ့ ပိုးကတကယ်မသေဘူးဗျာ... ဒါကြောင့် အစ်ကိုတို့ အိမ်တွေတော့လာလာလည်ပြီးတော့ ဘာမှခြေရာတွေ မထားတဲ့မိပေမယ့် အခုတော့မရတော့ဘူး... ပြန်ရေးတော့မယ်ဗျာ... ကိုဖိုးစိန်လည်းနေကောင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ....
ကမ္ဘာကြီးပျက်ပျက် မပျက်ပျက် ကိုယ်ကတော့ ကျိန်းသေပျက်ပါတယ် ကိုယ်ပျက်တာ သဘာဝကျပေမဲ့
ကိုယ်လေ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ဟိဟိ
ဂယ်ကို အဆင်သင့် ဖြစ်နေပီလားဂျ....